အမျိုးသားတို့ အထင်ကြီး၊သဘောကျအောင် မမတို့ ဆောင်ရန် ၁၃ ချက် | Ta Pwint Pan
အမျိုးသားတို့ အထင်ကြီး၊သဘောကျအောင် မမတို့ ဆောင်ရန် ၁၃ ချက်
September 18, 2012	By kokyawzin	ဒီနည်းလမ်းတွေအတိုင်းသာ ကျင့်သုံးသွားရင် အမျိုးသားတို့ရဲ့ အထင်ကြီး၊လေးစား၊ သဘောကျခြင်း ခံရမယ်လို့ ညွန်းထားပါတယ်။ အနောက်တိုင်းက ကျန်းမာရေးနဲ့ Life style ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု က ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ အနေနဲ့ အမျိုးသားတို့ အထင်ကြီး ခံရရန် ကျင့်ကြံရမယ့် နည်းလမ်း ၁၃ ချက်ဆိုပြီး ဖော်ပြထား ပါတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာ့ယာဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကိုက်ညီအောင် မြန်မာအမျိုးသမီး များအတွက် ယခုလို အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးလို မနေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဘက်က စကားတစ်ခွန်းခွန်း ဆိုလိုက်တိုင်း ကိုယ်က လိုက်ပြီးတော့ အကဲဖြတ်နေတာမျိုးကို အမျိုးသားတို့ မကြိုက်ကြပါဘူး။ သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာများကို စိတ်ဝင်စားသယောင်လေးပြပါ။
2.Punish him when he’s cocky
ဟုတ်ပါတယ်။ အမှားလုပ်တတ်တဲ့ ဘယ်အမျိုးသားကိုမှ ဒီတိုင်း ခွင့်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့။ ချိန်းထားတာထက် ၂ နာရီထက်ပိုနောက်ကျတဲ့ သူ့ကို ခွင့်လွတ်မိရင်တော့ အမှားကြီးမှားပါပြီ။ နောက် ဒါမျိုး လုပ်နေတော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချိန်းထားတာမှမဟုတ်ပဲ ကိုယ်နဲ့လမ်းလျှောက်နေစဉ် အခြား တစ်ဖက်ဖက်ကို ဘာမပြော၊ ညာမပြော ခဏလှည့်ထွက်သွားတာမျိုး ဆိုရင် စောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့။ ကိုယ့်လမ်းကို ဆက်လျှောက်သွားပါ။ စကားပြောရင်း ရိုင်းပြတဲ့စကားလုံးပါလာတာမျိုးဆိုရင်လည်း ခွင့်မလွတ်ပါနဲ့။ မှတ်သားလောက်အောင် အပြစ်တစ်ခုခုပေးလိုက်ပါ။ ဥပမာ-စကားဆက် မပြောတော့တာမျိုး၊ ဖုန်းချလိုက်တာမျိုး၊ ခဏ ရှောင်နေလိုက် တာမျိုး။ ဒီလောက်ဆို သူတို့ အမှားမလုပ်ရဲတော့ပါဘူး။
2. Smile and laughalot around him
အမျိုးသားတွေဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မရှက်မရွံ့ ရယ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သဘောကျကြပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ရယ်တတ်သည်ဖြစ်စေ။ ပဲမများပဲ စိတ်ထဲရှိသလို ရယ်တတ်စေဖို့ ဖြစ် ပါတယ်။ အဲဒီလို ရယ်ခြင်းက ရိုးသားပွင့်လင်းမှုကို သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။
3. Debate with him, And win it.
စကားနိုင်လုပါ။ အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတို့ရဲ့  ဥာဏ်ရည်သဏ်သွေး ကို စမ်းသပ်ချင်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ သူကစမ်းသပ်လာပြီး စကားနိုင်လုပြီ ဆိုရင် အရှုံးမပေးပါနဲ့။ တကယ်မနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ဇွတ်အတင်း ကိုယ့်ဘာကိုယ်နိုင်တယ်လို့ သဘောထားလိုက်တဲ့ အမူအရာလေးပြလိုက်ပါ။ အဲဒီလို အရှုံးမပေး တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကိုလည်း အမျိုးသားတွေက သဘောကျကြပါတယ်။
ပြောင်နောက်၊ စနောက်တတ်ရပါမယ်။ စကားပြောတယ်ဆိုတာ တစ်ဖက်သားကို ကဲ့ရဲ့ သလို စနောက်မှုမျိုးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- အနားမှာရှိတဲ့အခါ အိင်္ကျီမပေ၊မဟောင်းပဲနဲ့၊ အိင်္ကျီအပေ၊ အဟောင်း အစုပ်ကြီး အစရှိသဖြင့် မျက်နှာအမူအရာလေးနဲ့ ကဲ့ရဲ့ နောက်ပြောင်လိုက်ပါ။ သို့ပေမယ့် ရိုးရိုးသားသား စိတ်ထဲရှိသလို စနောက်၊ပြောင်နောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ တမင်ဟန်ဆောင်ရင်တော့ မထူးပါဘူး။ အဲလို စနောက်ပြီး ကွိုင်ရှာတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောင်္ကျားလေးတွေက သဘောကျတတ်ပါတယ်။
6.Don’t give in too easily
သူကကိုယ့်ကိုကြိုက်နေတယ်။ ကိုယ်ကလည်း သူ့ကိုပြန်ကြိုက်တယ်။ ဒါဆိုပြီးပြီဆိုပြီး ချက်ချင်း အဖြေပေးလိုက်တာမျိုး၊ အခွင့်အရေးတွေ အများကြီး ပေးလိုက်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ ယောင်္ကျားလေးတွေက အလွယ်တကူရရင် တန်ဖိုးထားမှု သိပ်မရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူ့ဖက်က ဖွင့်ပြောလာပြီး ကိုယ်ကချစ်နေရင်တောင် အဖြေမပေးသေးပါနဲ့။ အပြင်မှာ တွေ့ဆုံ စကားပြောပါ၊ ဖုန်းဆက်စကားပြောပါ၊ သူတကယ်ချစ်တာ မှန်မမှန် သေချာ သဘောပေါက်နိုင်တဲ့အထိ လေ့လာပါ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ ချက်ချင်းအဖြေပေးလိုက်ရင် ကိုယ်က ချစ်ပါတယ်လို့ အရင်ပြောတဲ့ သဘော သက်ရောက်သွားပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ရတာလို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။
7.Tempt him with your appearance
အလှပြင်ထားပါ။ အလှပြင်ဆိုလို့ လှတဲ့သူတွေကိုပဲ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါ ကိုယ့်အနေနဲ့ Perfect ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆတဲ့ အဝတ်အစား၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲပါ။ အဲလိုအကောင်း ဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ အတူတူထိုင်ရင် အမျိုးသားတွေဟာ အခြား ကောင်မလေးလေး၊ အတွဲများထက် ကိုယ့်ကိုယ် ပြန်လည် အထင်ကြီး တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကိုပဲ သူတို့က မျော်လင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေ ရေမွေးမကြိုက်ဘူးဆိုတာ အလကားပြောတာပါ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ အနံ့တစ်မျိုး ရှိနေတာမျိုးကို သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအနံ့ကို စွဲလမ်းပြီး သူမရှိတဲ့အချိန်တောင် အနံ့ကလေးကို ပြန်လည် တတိရတာမျိုးတို့ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ရေမွေးတစ်မျိုးမျိုးကို စွဲသုံးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
9.Be kind to everyone
သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တိုင်း ကိုယ်က ကြင်နာတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပုံစံ ရှိနေရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဆိုင်မှာ ထိုင်ရင်း အအေးသောက်တုန်း အလှူခံများ၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း သူတောင်းစားများ လာတောင်းရင် လှူတန်းပေး ရပါမယ်။ အမျိုးသားက ဝမ်းနည်းစရာ တစ်ခုခု ပြောပြတဲ့အခါ အရမ်းသနားသယောင်နားထောင်ပြီး လိုက်ခံစားပေးပါ။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သနားတတ်တဲ့ စိတ်ကိုလည်း အမျိုးသားတွေက နှစ်သက်ကြပါတယ်။
10 Be spontaneous and alive
ပျင်းရိနေတဲ့ပုံ ပေါက်မနေပါနဲ့။ သူနဲ့ ရှိနေစဉ် ကိုယ်က စိတ်ဝင်စားမှု သယောင်နေရပါမယ်။ သူဘာလုပ်လုပ် ကိုယ်လည်း စိတ်ဝင်တစား လိုက်လုပ်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေး တဲ့အခါ ရှက်ရွံ့ တဲ့အမူအရာ ဖြစ်မနေပဲ ရင်းနှီးစွာ ပြောဆို ဆက်ဆံရဲရ ပါမယ်။ အချို့ က ရှက်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးကို သဘောကျတယ် လို့ ပြောကြပါတယ်။ အမှန်တော့ အဲလိုရှက်တာဟာ မာယာသဘော သာ ဖြစ်ပါတယ်။ မရှက်ပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆို၊ သွက်လက်နေတဲ့ မိန်းကလေးကို သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။
10.Show the guy the competition
သူဘက်က လိုက်တုန်းပဲရှိသေးတယ်။ ကိုယ်ကကြိုက်နေပြီဆိုတော့ အခြားကောင်လေးတွေကို လှည့်မကြည့် တော့တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ကို တွေ့လို လာနှုတ်ဆက်တဲ့ မိတ်ဆွေ ကောင်လေးတွေ၊ ကိုယ်မကြိုက်ပေမယ့် တစ်ဖက်သက် သဘောကျနေတဲ့သူတွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောဆိုပါ။ အဲလို ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုခြင်းကို အမျိုးသားတို့က သဝန်တိုတတ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အပြိုင်အဆိုင်တွေရှိလာပြီလို့ သတ်မှတ်ပြီး ပိုပြီးတော့ ကြိုးစားလာတတ်ကြပါတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ရတဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင် အမျိုးသားတို့က တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်။
12.Don’t use him.
သူကိုယ့်ကို ချစ်ခွင့်ပန်ပြီးဖြစ်စေ၊ သဘောကျတဲ့အဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်ပဲဖြစ်စေ ဘယ်တော့မှ မခိုင်းပါနဲ့။ ပစ္စည်းမှာလိုက်တာမျိုး၊ စကားမှာခိုင်းတာမျိုးတို့ပေါ့။ အမျိုးသားတို့က အဲလိုခိုင်းတာ သိပ်မကြိုက်ချင်ကြပါဘူး။ အဲလိုခိုင်းပြီဆိုရင်လည်း သူတို့ဘက် က သေချာနေပြီလို့ အပိုင်တွက်တတ်ကြပါသေးတယ်။ ဒီတော့ ခိုင်းမယ့် အစား အကူအညီတောင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်မလုပ်နိုင်ဘူး အကူအညီ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သာ သိအောင်ပြပြီး သူ့ဘက်က အလိုလို ကူညီတာကို စောင့်ဆိုင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများက အဲလိုနေရာ ကျရင် လူစွမ်းကောင်းပမာ ကျေနပ်နေတတ်ကြပါတယ်။
13.Leave inamemorable manner
သူ့ကိုယ် ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်တရဖြစ်ရပ်လေး ပြောပြပါ။ ဒီထက်ပိုလိုအပ်တာ ကတော့ သူနဲ့ အမှတ်ရစရာ တစ်ခုခု ရှိသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ပဲ သာမန် ကိစ္စလေးဖြစ်နေရင်တောင် အမှတ်ရစရာ မရှိဘူးဆိုရင် အမှတ်ရစ ရာ ဖြစ်အောင် လုပ်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ ဒါကိုလည်း တကယ်အမှတ်ရနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာ- ပလာဇာမှာ သူနဲ့ အတူတူ ရှော်ပင်ထွက်ရင်း အဝတ်တစ်ထည် ကျန်ခဲ့တာမျိုး။ သူနဲ့ချိန်းမှ မိုးရွာပြီး ထီးမပါတာမျိုး။ အဲဒါမျိုးကို တကယ်ပဲအမှတ်ရနေသယောင် ရင်ဖွင့်ပြောပြပါ။ အဲလို သူနဲ့ အတူ အမှတ်ရပေးတဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင် အမျိုးသားတွေက သဘောကျ တတ်ကြပါတယ်။
အထက်ပါအချက်များအတိုင်း လိုက်လံကျင့်သုံးရင် အမျိုးသားတို့ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ကြိမ်းသေ သဘောကျလာမှာဖြစ်တယ်လို့ ယင်း ဝဘ်ဆိုဒ်က အာမခံထားပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယင်း အချက်များ အတိုင်း လိုက်လံကျင့်သုံးခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတိုင်းနဲ့ သင့်တော်တာမို့ ရေးသား မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
Ref : အောင်ခမ်း
← FACEBOOK VIRUS ကာကွယ်နည်း (၅) မျိုး	Edison – ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုရာဝယ် →